Nnu Sallo Chlorinator, Igwu Igwu Pool - Blueworks
Ego: USD $
Onye na-enye iwu
Mkpụrụ ndụ dochie
Sel na-acha anụnụ anụnụ
Oti mkpu na Pool
Oge mmiri ọdọ mmiri
Ihe ohuru ohuru na ndi ozo zuru oke nke ozo maka odo mmiri, adighi iche na ihe na-aputa n'igwe gi. Ndị ọkachamara ma nwee ahụmịhe na mmiri dị ọcha.
Agakwaghị agwakọta ya na mmiri mmiri ma ọ bụ mbadamba chlorine gas, tụọ ma ọ bụ mebie ya. Ugbu a, acha anụnụ anụnụ na-enye gị ihe ngwọta nke disinfection, ị nwere ike ị nweta mmiri kachasị dị ọcha, nke kachasị dị nro na nke dị nchebe. Anyị nwere sistemụ chlorinator nnu na ionizer na ozone n'ọdịnihu iji nye mmiri kacha mma.
Injinia na US, nke Energy Star kwadoro, ndị okike imepụta igwe mgbapụta na ndị ọkwọ ụgbọ ala, Blueworks bụ ebe a iji nye ihe ịchọrọ maka nfuli gị.
Mkpụrụ ndụ mgbanwe
Iji kwado sistemụ chlorinator gị na-arụ ọrụ kpam kpam iji nwee ịdị ọcha mmiri dị ọcha, Blueworks nwere ọtụtụ mgbanwe nke sel. Ha bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na-adịte aka ka anyị na-arụpụta ihe karịrị afọ 16.
Blueworks nwere nfuli dị iche iche dị iche iche na California Energy Star Nkwado na ETL, Canda CSA Nkwado na-ekwenye na ị ga-enwe mgbapụta zuru oke maka ọdọ mmiri gị. VSP ọdọ mmiri mgbapụta ga-abụkarị ihe na US ahịa dị ka ọ bụ elu oru oma ịzọpụta ume.
Blueworks SPP1515VS Pool mgbapụta
Igwu Pool Saltwater System BLSC
Nnu Chlorinator BLPT
Blueworks IGP2115VS Agbanwe Speed ​​mgbapụta
Blueworks AGP1515VS Agbanwe Speed ​​mgbapụta
Blueworks Vsm Premium arụmọrụ agbanwe Speed ​​...
Blueworks Solar Robotic ọdọ mmiri Cleaner
Blueworks Pool Chemistry Nyochaa
Blueworks Salinity Nyocha Kit
BLUEWORKS CORPORATION bụ ọkachamara na mmepe na imepụta ọtụtụ ihe eji egwu mmiri. Dị ka onye na-emepụta ihe na-eduga, anyị debere alaka ụlọ ọrụ na NC, USA maka mgbe erechara ya. Mgbe afọ iri nke mgbasa, anyị toro na-otu n'ime ihe dị mkpa igwu mmiri ngwa suppliers na USA.
Ngwaahịa gụnyere, Salt Chlorinator, Salt Chlorinator Cell Replacement, Saltwater System Parts, Pool Light, Pool Alarm, Pool Timer, Pool Pump na na.
Dabere na Cdc Enweghị Evidence na Covid-19 nwere ike ịgbasa ụmụ mmadụ site na iji ọdọ mmiri na tubs na-ekpo ọkụ. Ọrụ Kwesịrị Ekwesị, Mmezi na Disinfection nke Igwu Mmiri Na Ọkụ Na-ekpo ọkụ (Dịka ọmụmaatụ, Disinfection with Chlorine And Ionizer) Kwesịrị Wepụ Ma ọ bụ Nje Virus Na-adịghị Eme Ihe Na-akpata Covid-19.
Anyị na-arụ ọrụ nkịtị ka ị nye gị ụdị.
6 abọchị n'izu, site na 8:30 am ruo 4:30 pm